टाढाटाढा घुम्न जाने रहर
- सक्रिय संग्राैला
कोरोना सुरु भएपछि तीन/चार महिना घरभित्र बस्यौँ । त्याेभन्दा अघि दिनैपिच्छे स्कुल जानुपर्दा दिक्क लाग्थ्यो । कहिलेकाहीँ त घरमै बस्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच्थेँ । तर, यसपालि घर बस्दाबस्दा यति पट्यार लाग्यो कि कहिले स्कुल खुल्ला र जानुजस्तो भयो । धेरै मानिस जम्मा हुन नपाएर होला, दसैँ र तिहार पनि खासै रमाइलो भएन ।
अब त स्कुल लाग्न थालिसकेको छ । तर, पहिलेजसरी सजिलो तरिकाले स्कुल जान पाइँदैन । न त स्कुल पुगेर बस्न नै सजिलो हुन्छ । फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, कडा गन्हाउने स्यानिटाइजर, उफ् ! म त हैरान भइसकेँ ।
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन आएको सुनेको छु । लकडाउनमा काम गरेका मानिसहरूले पहिले लगाउन पाउने रे ! उनीहरूले लगाइसकेपछि मेरो बाबामामु, अनि परिवारको पनि पालो आउँछ हाेला । यही पर्खाइमा छु ।
मेरा केही साथी बाबामामुसँग घुमेर आएको बताउन थालेका छन् । आफूलाई अलिक टाढाको ठाउँ घुम्न जान मन लागेको आजदेखि होइन । बाबामामुलाई मैले दसैँदेखि नै घुम्न लैजानु न भनिरहेको छु- अब त मास्क र स्यानिटाइजर लगाएर बाहिर घुम्न जान भइहाल्छ नि !
तर, ‘खेलाँची गर्न हुँदैन, जहाँ त्यहीँ जाने बेला भएको छैन’ भन्दै उहाँहरूले घुमाउन लानुभएको छैन ।
भगवान्‌सँग मेरो प्रार्थना छ, छिटोभन्दा छिटो सबै कुरा पहिलेको जस्तै बनोस् । अनि म बाबामामुसँग बिदाको दिन भेडेटार घुम्न जान पाऊँ, बेतना जान पाऊँ, मामाघरतिर जान पाऊँ । सबैभन्दा पहिला त म भेडेटार जाने हो । सफा मौसम भएकाे बेला त्यहाँबाट धरान हेर्न कस्तो मज्जा आउँछ ! म फेरि पनि प्रार्थना गर्छु– भगवान्, चाँडै सबै कुरा पहिलोको जस्तै होस् !
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ८, २०७७, ०६:००:००